सरकारले विभिन्न ठाउँमा विरोध, सभा, जुलुस गर्नमाथि लगाएको निषेधाज्ञा विरुद्ध र चिकित्सा क्षेत्र सुधार गर्नुपर्ने मागसहित जुम्लामा आमरण अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीको मागको समर्थनमा शनिबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको छ । प्रदर्शनमा सरकार विरोधी नाराहरु लगाइएको छ । ओली सरकार खबरदार मौलिक हकमा किन प्रहार, नागरिक स्वतन्त्रता खोस्न पाइँदैन, निषेधित क्षेत्र घोषणा अवज्ञा गर्छौं लगायतका नाराहरु लगाइएको छ । तस्बिरमा हेरौं विरोध प्रदर्शन ।
काठमाडौंमा जंगबहादुरको जार ! [तस्बिरहरु]
जहानियाँ राणा शासनको जग बसाल्ने जंगबहादुरको मृत्युसम्बन्धी थुप्रै रहस्यमय प्रसंग छन् । कतै एक्कासी रगत छादेर मृत्यु भएको सन्दर्भ छ, कतै बाघले झम्टेर । सर्लाहीको पत्थरघट्टामा जंगबहादुरलाई तामाङ जारले काटेको प्रसंगमाथि संस्कृतिविद् एवं अन्वेषक रवीन्द्र ग्याबाक तामाङले पुस्तकै लेखेका छन् ।
बादलको घुम्टोभित्र फक्रदै लेकाली सौन्दर्य
जथाभावी भौँतारिदा आनन्द प्राप्त हुँदैन । यात्रा बौद्धिक र शारीरिक सौन्दर्यको अनुभुति बढी हो । जुन ठाउँमा पाईला टेकेपछि मनमा आनन्दभूति हुन्छ । त्यस्तो ठाउँलाई ‘ड्रिम डेस्टिनेसन’ भन्ने गरिन्छ ।